Abathengi bafuna isizathu esinye kuphela sokucaphuka kwaye bahambe. Ngelishwa, amashishini abanika uninzi lwezi zizathu. Zihlala zibizwa ngokuba "zizono ezisi-7 zeNkonzo," kwaye iinkampani ezininzi zivumela ukuba zenzeke ngokungazi. Badla ngokuba sisiphumo sabadlali abaphambili abaqeqeshelwa ngaphantsi, ngaphezulu kwe-str...
Abathengi abalahlekileyo bamele indawo enkulu yamathuba. Abathengi bangaphambili bayayiqonda imveliso yakho, kunye nendlela esebenza ngayo. Ngaphezu koko, badla ngokushiya ngenxa yezizathu ezilungiswa ngokulula. Kutheni abathengi behamba? Ukuba uyazi ukuba kutheni abathengi behamba, kulula kakhulu ukubabuyisela. Nazi izizathu eziphezulu zoku...
Ukuvula iifowuni ezibandayo ngomyalezo ochanekileyo: Isitshixo sokukhangela
Buza nawuphi na umthengisi ukuba yeyiphi inxalenye yokuthengisa abangayithandiyo, kwaye oku kuya kuba yimpendulo yabo: ukubiza okubandayo. Kungakhathaliseki ukuba baqeqeshwe kangakanani na ukuze babe nodliwano-ndlebe kwaye bagxininise kubathengi, abanye abathengisi bayakuxhathisa ukwenza umbhobho onethemba lokwamkela iminxeba ebandayo. Kodwa oko kuseyiyo ...
Ngaba ufuna ukuphucula amava abathengi? Yenza njengesiqalo
Umbhali uKaren Lamb wabhala, “Kunyaka ukususela ngoku, uya kunqwenela ukuba wawuqalile namhlanje.” Yingcinga ezona ziqalo zikhula ngokukhawuleza zithathelwe kumava omthengi. Kwaye nawuphi na umbutho ofuna ukuphucula amava abathengi uya kufuna ukuwuthatha, nawo. Ukuba ucinga ngerevvi...
Indlela yokudibanisa i-imeyile kunye nemidiya yoluntu ukuze ufumane amava angcono kubathengi
Uninzi lweenkampani zisebenzisa i-imeyile kunye nemidiya yoluntu ukunxibelelana nabathengi. Hlanganisa ezi zimbini, kwaye unokwandisa amava omthengi. Qwalasela indlela esebenza ngayo indlela eneentloko ezimbini enokuthi isekwe kwindlela nganye esetyenziswa ngayo ngoku, ngokophando oluvela kwiSocial Media namhlanje: 92% yabantu abadala abakwi-intanethi kuthi...
Ukophula eyona ntsomi inkulu yokuthengisa ngalo lonke ixesha
Ukuthengisa ngumdlalo wamanani, okanye ke ilizwi elidumileyo liya. Ukuba wenza iminxeba eyaneleyo, ube neentlanganiso ezaneleyo, kwaye unike iintetho ezaneleyo, uya kuphumelela. Okona kulungileyo, yonke into ethi "hayi" oyivayo ikusondeza kakhulu ku "ewe." Ngaba kusakholeleka oku? Akukho nto ibonisa impumelelo kwintengiso Th...
Iingcebiso ezi-6 zokulandela phambi kokuba kuqale uthetha-thethwano
Ungalindela njani ukuba ufike ku-“ewe” kuthethathethwano ukuba awukafikeleli ku-“ewe” nawe phambi kothetha-thethwano? Ukuthi "ewe" kuwe ngovelwano kufuneka uze ngaphambi kokuthethathethana nabathengi. Nazi iingcebiso ezintandathu eziya kukunceda ukuba uqalise uthethathethwano lwakho luqale kakuhle...
Xa umthengi ekwala: 6 amanyathelo okuphinda abophe
ngu admin on 21-10-17
Ukwaliwa yinxalenye enkulu yobomi bomthengisi ngamnye. Kwaye abathengisi abanqatshelwe ngaphezu kwabaninzi badla ngokuphumelela ngakumbi kunabaninzi. Bayaluqonda urhwebo lomngcipheko-womvuzo onokuwuzisa ukugatywa, kunye namava okufunda afunyenwe ekwaliwe. Buyela emva Ukuba ukwindawo...
Iindlela ezi-4 zokufumanisa ukuba abathengi bakho bafuna ntoni
Amanye amashishini aseka iinzame zawo zokuthengisa kwingqikelelo kunye ne-intuition. Kodwa abo baphumelele kakhulu baphuhlisa ulwazi olunzulu malunga nabathengi kwaye balungelelanise imizamo yabo yokuthengisa ukujongana neemfuno kunye neenjongo zabathengi. Ukuqonda iimfuno zabo Ukuqonda ukuba ngawaphi amathuba afunekayo, idiski...
Ixesha lokuzama iVeki yeSizwe yeNkonzo yabaThengi
Nokuba ngaba amava abathengi bakho basebenza kwindawo okanye ukude, lixesha lonyaka lokubabhiyozela, abathengi bakho kunye nawo onke amava amnandi. Phantse iVeki yeSizwe yeNkonzo yabaThengi – kwaye sinezicwangciso zakho. Umbhiyozo wonyaka yiveki yokuqala epheleleyo yomsebenzi ka-Octo...
Kukho iintlobo ezi-4 zabathengi: Indlela yokuphatha nganye
Ukuthengisa kufana nokungcakaza ngeendlela ezininzi. Impumelelo kushishino kunye nokungcakaza kufuna ulwazi olulungileyo, imithambo-luvo, umonde kunye nokukwazi ukuhlala upholile. Ukuqonda umdlalo wethemba Phambi kokuba uhlale phantsi nabaza kuba ngabathengi, zama ukufumanisa ukuba nguwuphi umdlalo umthengi...
Amanqanaba ama-5 okuzinikela kwabathengi - kwaye yintoni eqhuba ukunyaniseka
Ukuzibophelela kwabathengi kunokuthelekiswa nobuhle - kuphela ulusu olunzulu. Ngethamsanqa, unokwakha ubudlelwane obunamandla kunye nokunyaniseka ukusuka apho. Abathengi banokuzinikela kwiimveliso, iinkonzo kunye neenkampani ezikumanqanaba amahlanu ahlukeneyo, ngokutsho kophando olutsha oluvela kwiYunivesithi yaseRice. Isixhobo esitsha...